Abathwebuli bezithombe abaningi bazibuza lo mbuzo: "Yimaphi ama-optics ama-wide angle afanelekayo kumadivayisi we-Nikon?" Wonke amasu alo mkhiqizi ahlukaniswe ngamaqembu amabili aphambili: ochwepheshe nabaqalayo. Phakathi kwabo kukhona ama-DX-models kanye ne-FX. Zihlukana phakathi kwazo ngokuthi lezi zinsuku zathola ama-sensor full frame kusuka kumenzi. Ama-optics kufanele afunwe kuye ngobukhulu be-sensor eyakhelwe ngaphakathi. Lokhu kungenxa yokuthi kumadivayisi we-DX-uhlobo lwama-ultra-wide-angle amadivaysi, ngeshwa, ngeke akwazi ukunikeza i-angle yokubuka oyifunayo. Kulesi sihloko, ake sibheke ama-lens aphezulu kakhulu angama- Nikon.
I-Sigma 10-20 / 3.5
I-lens echazwe yamukelwe kusuka kumenzi wezimpawu ezinhle kakhulu, ikhwalithi ephezulu yokuhlangana kanye nayo yonke imisebenzi emihle. Izindleko ezijwayelekile ze-optics ngu-$ 400. I-lens ihluke kumncintiswano wayo ngokuthi inombono omkhulu, futhi ukhetho lokuqiniswa kwesithombe alukho. Kusukela ebangeni elikhulu lamadivaysi agxile kakhulu e-ultra-wide ahlinzekwa ngu-Sigma, lona unenani eliphansi, likhulu futhi lihle kangcono ngekhwalithi. I-optics diaphragm ithole amakholi ayisikhombisa. I-zoom iyinhlobo yezintambo, ayinakusiza. Ubukhulu besimodeli buyamangalisa ngobukhulu, bunomucu okhethekile ngaphansi kwesihlungi. Ububanzi bayo bungu-82 mm. Ama-Optics athola izinga eliphakeme lokubukeka nokuphambene, futhi lezi zikhombisi zihambisana ngokufanako kuwo wonke ama-foci. Ukuhlelwa kulawulwa ngokuphelele, ukuphazamiseka cishe kungabonakali. Le optics iphumelele kakhulu kulabo abasanda kuthatha izithombe noma sebevele beyi-amateur. Isilinganiso sekhwalithi kanye nenani eliyinzuzo kakhulu. Uma udinga ukukhetha i-lens-angle angle ye-Nikon, kungcono ukuthi unake lo modeli.
Le optics izogwema ukusebenzisa "inqubo ye-fisheye". Ngenxa ye-angle ephezulu yokubuka, i-lens ivumela ibanga elincane ukusebenzisa imisebenzi ekhethekile nezinketho ezitholakalayo kumadivayisi angaphezulu ochwepheshe. Ukwakhiwa kokungenwe ngaphakathi, i-optics inikeza izinga eliphezulu lobukhali. Ikakhulukazi i-last ikhona phakathi kwezithombe, noma ngabe ubude obugxile buyinto encane. Impendulo evela kubanikazi be-lens ivumela ukuthi siqonde ukuthi ukuphazamiseka kulawulwa kahle. Ngendlela, lesi samuva sivame ukukhipha le nqubo. I-stabilizer ayikho, i-diaphragm isebenza ngokuhluleka. Kodwa-ke, uma i-angle yokubukwa ikhethwa ngokugcwele, i-lens ibonisa kuphela ukusuka ohlangothini olungcono kakhulu.
Enye idivayisi enhle evela kumakhi "Sigma". Lo modeli yilona lens elibanzi kunazo zonke e -Nikon. Wazihlukanisa nge-zoom encane (izikhathi ezimbili), kodwa ngesikhathi esifanayo une-angle enkulu yokubukwa, futhi i-autofocus iyasheshaza ngangokunokwenzeka. Iningi lama-optics avela kumkhiqizi lingase libukeke njengendlela yobuchwepheshe. Ikakhulukazi uma kuziwa ngentengo, ubuchwepheshe kanye nokucaciswa. Lo modeli kufanele uqaphele wonke umuntu odinga ama-optics ama-wide angle. Ngisho ukuthi i-zoom ayifanele, ekude ubude obuphezulu kunomphumela ophawulekayo ekubuyekezweni. Lokhu kunenzuzo yalesi simodeli. I-lens ngokwayo ihlukanise ngobukhulu obukhulu, sekude. I-hood ikhona ngqo kulokhu, ngenxa yokuthi izilinganiso ezithandekayo zitholakale. I-ring yokusondeza isebenza kahle, uhlelo lokugxila nalo. Umhlangano usezingeni elihle kakhulu. Impendulo kuphela yukuthi ekugcineni kobubanzi ungabona ukuphazamiseka. Kodwa uma sicabangela lo modeli njengedivayisi ene angle elibukekayo lokubuka kanye nekhwalithi elihle, le lensi ayilingani.
I-Tokina AT-X 16-28 / 2.8
Le lens iyi-lens enkulu ye- Nikon D3100. Kukhulu futhi kunzima kakhulu. Isisindo sawo sasi-1 kg. Lokhu kwakuthonywe inombolo yokuvula njalo. Isithuthuthu esakhiwe ku-optics sinokuthula futhi isebenza kahle. Okufanayo kungashiwo ngokugxila okuzenzakalelayo, ukusondeza ukusebenza. Uma uqhathanisa lo mdwebo nabanye, okwakhiqiza lo mkhiqizi, kufanele kuqashelwe - kungenye yezinto ezinhle kakhulu. Yini ehlukanisa le optics kusuka kumncintiswano womkhiqizi wayo? Ukuba khona kwendlela evumela ukuthi uguqule phakathi kokugxila okuzenzakalelayo nokubhaliwe. Ixhumeke ngqo ku-ring. Ukufunda ukubuyekezwa kwabanikazi, singaphetha ngokuthi lesi sombululo siphumelele kakhulu futhi sinembile kakhulu. Lokhu kuqeda ukungcola okungadingekile kwesikhathi somshini omude. I-lens inikeza izinga elihle kunazo zonke lezithombe, okudala ochwepheshe. Phakathi nendawo kukhona ubukhali, kukhona ukuhlela okhethekile. Kodwa-ke, abanye bakholelwa ukuthi ama-angles angase abe omncane kakhulu. I-hood eyakhelwe ngaphakathi yakhiwe ngaphakathi, ngakho-ke kuyohlale kungenzeka ukugwema ukukhanya nokubuka kabili. Kodwa ngenxa yalokho awukwazi ukusebenzisa izihlungi.
I-Tokina AT-X Pro 12-28 / 4 DX C
Ngenxa yokuthi i-lens ine-12 cm ubude obukhulu, ayikwazi ukubizwa ngokuthi i-angle-angle. Kodwa-ke, usenalo lesi sihloko. I-Optics inikeza ukusondeza okubanzi. Ibuye ikuvumele ukuba udonsa kunoma yiziphi izimo, okwenza kube yinto yonke. I-lens inokwethenjelwa futhi inesithuthuthu esithulile. Abathengi bacacise ukuthi idivayisi ayinayo indlela yokulawula ngesandla. Ngaphezu kwalokho, ayikho indlela ekhethekile engasiza ekushintsheni ngokushesha izindlela zokugxila. Uma ukusondeza kuncane, ukuphazamiseka okuncane kungavela. Emadolobheni amade - akakho. Ubukhali buphakeme, kodwa hhayi kakhulu ukudlula imodeli yangaphambilini.
I-Nikon AF-S 18-35 / 3.5-4.5
Lo modeli yileli lensiza elingabizi kakhulu elise-Nikon. I-optics inokuvula okuguquguqukayo. Yona ngokwayo incane kakhulu futhi ishibhile. Kuyini ukulahlekelwa ngumthwebuli wezithombe? I-angle yokubuka ishintshile kancane. Lokhu kubonisa ukuthi izilaleli ze-lens ziyizicabangi nabaqalayo. Yakha ikhwalithi ezingeni eliphezulu. Ukuvimbulula akusoze kube khona, kodwa ngokuvamile, ama-optics awawathinteli. Ukumboza kwedivaysi kuyinkimbinkimbi, okukuvumela ukuba ususe izikhwama ezingadingekile kanye nemonakalo yomshini. Uma ukudubula, ukukhanya akuveli. Abanikazi bakwenza kucacise ukuthi ukuvimbela ukulawulwa kwemithi kulawulwa kahle, ngakho-ke akukho zikhalazo. Ngaphezu kwalokho, idivaysi eshibhile lezo zinkomba ziningi kakhulu. Imininingwane encane iyabonakala ngisho noma ikhona ekugcineni. Ngokucacile ebangeni elincane lokusondeza kancane ukudumazeka. Amanye ama-lens angama-wide angle we-Nikon anezilungiselelo ezingcono.
I-Nikon AF-S 14-24 / 2.8
I-lens ingamangaza abanye ngobukhulu bayo, kodwa ukusebenza kusezingeni elihle. Lokhu kuvulwa kuyasiza kumadivaysi nama-full format format. Ngisho nokuthi i-lens ayikwazi ukunikeza i-angle yokubukwa ebanzi, enye indlela noma enye, inikeza ikhwalithi yesithombe esihle, ngaphandle kokuphazamiseka nokuphazamiseka okuncane. Le optics iyabiza. Kuthatha cishe ama-$ 1500. Ukubuyekeza kuqinisekisa ukuthi i-lens-angle angle Nikon F (umphikisana nomfanekiso ochazwe) uncane kakhulu, okufanayo - okunye okungaphezulu. I-lens yangaphambili ivuliwe ngokuqinile. Kuye, kuzodingeka uthenge umxube okhethekile obukeka sengathi ufana nesilwane. Siyabonga, ngeke kuvele i-glare. I-Autofocus isebenza ngokushesha, kunokuthi "idumise" wonke ama-lens amaningi-angle we-Nikon.
UThamron 15-30 / 2.8
I-last in lens yokubuyekezwa ayikho kakhulu, kodwa inezilinganiso ezidingekayo ukuze uthole isihloko esifanele. Ukusondeza kunamandla, kunomshini wokumangalisa othakazelisayo. Idizayini ayikwesabi umswakama, ithole ikhwalithi yokwakha okuhle futhi ngenxa yalokho inikeza ukudubula okuhle. I-Autofocus ithule, ibushelelezi futhi iyashesha. Izici ezifanayo zinayo yonke i-lens-angle lens ye-Nikon.